सहर न तिम्रो थियो न मेरै- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
वैशाख १२, २०७७ सरिता गिरी
काठमाडौँ — विश्वभरि त्रास फैलाइरहेको कोरानाको समाचार अक्सर म मामाको पसलमा बसेर साथीहरूसँग गफिँदै चियाको चुस्की लिँदै पढ्थें । दिनहरू बिस्तारै घिस्रिँदै थिए । यो भाइरसले नेपाल–यात्रा पनि गर्ला ? चिन्ता र चासो हाम्रो चिया गफमा सधैं हुन्थ्यो ।
नभन्दै यो भाइरस मामाको चिया पसलसम्म आइपुग्यो । चिया पसलबाट बिस्तारै हामी साथीभाइ टाढा हुन थाल्यौ । बाहिर ननिस्की सबै आ–आफ्नो घरमै बस्न थाल्यौं । लगत्तै होली आयो ।
सरकारले एक हप्तादेखि होलीमा पानी नखेल्नू, धेरै मान्छे जम्मा हुने ठूल्ठूला कार्यक्रम नगर्नु भनी सूचना जारी गरेको थियो । होली नखेले पनि म साथी पशुपति राईको घर गएँ । उनी मेरो सबैभन्दा नजिकको साथी । त्यहाँ ममात्र थिइनँ । अरु साथी–बहिनीहरू पनि बिस्तारै भेला हुँदै थिए । एकले अर्कालाई रङ लगाएर, खाना खाएर आ–आफ्नो घरतिर आइयो । होलीको भोलिपल्टदेखि हामी सबै सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने निर्णय गरेका थियौं । अब पालो आयो– वर्षौंदेखि थन्किएर बसेका किताब पढ्ने । ती सबै नपढेका किताब ओछ्यानभरि भए ।
कहिले किताब पढ्ने, कहिले फिल्म हेर्ने ! ५ दिनसम्म त पढियो तीनवटा किताब लगातार । त्यसपछि मेरी आमै कति पढ्नु ! कति फिल्म हेर्नु ! घरको काम त छँदै थियो । समाचार, किताब पढ्दा–पढ्दा वाक्कदिक्क लागिसकेको थियो, झन्झन् स्थिति डरलाग्दो हुँदै थियो ।
अब पालो आयो लकडाउनको । फाइनल्ली सरकारले लकडाउन गर्‍यो । यो जरुरी पनि थियो । एक हप्तालाई हामी घरबाट बाहिर जान नपाउने । सुरुसुरुमा त किताब पढ्ने, फिल्म हेर्ने, घरको काम गर्नेमा व्यस्त भइयो । अब त त्यो पनि कति गर्नु ! अब अलिकति अगाडिको कुरा गर्छु है !
फेसबुकमा १, २ महिना अघिदेखि नयाँ साथीहरूको लिस्ट थपिएका थिए । ती नयाँ साथीहरू नौला थिएनन् तर मेरा लागि भने नौला थिए । पहिला कहिल्यै गफ नभएका ! लकडाउनको दोस्रो हप्ता मलाई लेख्न मन लागेको केही केही– ती साथीबारे । ती साथी, जो मेरा फेसबुकमा सुरुमा अति नै नौला र मायालाग्दा थिए । फेसबुकमा मैले भेटेका पाँचखाले साथीहरू यसप्रकार छन्–
१. आफूलाई एकदम ‘सो अफ’ गर्ने २. एकदमै ज्ञानी ३. उद्दण्ड ४. सेक्सका कुरा गर्न बढी रुचाउने र ५. सबै कुरामा जानकार । पाँचैथरि साथीको व्याख्या गर्नु जरुरी छैन । तर, म एकथरी साथीको कुरा अलि विस्तृतमा गर्छु ।
यो लकडाउनमा मेरो मन पनि लकडाउन भएको छ । मनभरि प्रश्न आइरहन्छ । यी शब्द लेख्दा पनि प्रश्न आइरहेकै छन् । आखिर किन ?
सायद केही विषयले मनमा नबिझेको भए म यो लेख लेख्ने पनि थिइनँ । मलाई थाहा छ, मान्छेका अनगिन्ती चाहना हुन्छन् । तर, यसको मतलब यो हेइन– मेरो चाहना वा इच्छाले कसैको भावनामाथि ठेस पुर्‍याओस् ।
तिमी किन फेसबुकमा मसँग जोडिन आयौ– त्यो पनि थाहा छैन, मबाट के चाहेका थियौ– त्यो पनि थाहा छैन । तिमीले बोलेका हरेक शब्द मेरा लागि प्रिय बन्दै गएका थिए या भनौं तिमी मेरो मनमै बस्दै गएका थियौ । ‘शुभप्रभात’ तिमीबाटै सुरु हुन्थ्यो, ‘शुभदिन’ अनि ‘शुभरात्रि’ पनि । मैले उत्तर नपठाएका दिन तिम्रो छटपटाहट तिमीले गरेका प्रश्नबाटै थाहा पाउन सकिन्थ्यो । तिमीले बेलाबेला मलाई सोधेका प्रश्नले अचम्मित हुन्थें । तिमी सोध्थ्यौ, ‘एकदिन तिमीसँग संवाद भएन भने किन हो किन दिनै खल्लोजस्तो लाग्छ । म तिमीलाई मिस गर्न थालेको छु, काली के यो माया त होइन ?’ म यताबट ‘हा... हा...’ लेख्थें । तिम्रो प्रश्नमा मेरो उत्तर हुन्थ्यो, ‘खै ?’ किनभने तिमी पनि त लकडाउनमा परेका थियौ । सायद तिम्रो पनि अरु कोही थिएन् कुरा गर्ने साथी । बेलाबेला मलाई कविता फुर्थ्यो र सुनाउँथें ः
प्रेमको लेखाजोखा कहाँ हुन्थ्यो
हुने भए त तराजुमा जोख्थें
तराजुको काँटा कहिले तिम्रोपट्टी
कहिले मपट्टी हुन्थ्यो
कहिले तिमीले जितेजस्तो
कहिले मैले हारेजस्तो हुन्थ्यो ।
आफ्नो भागबाट एक चिम्टी माया निकालेको तिमी कहाँ पाउँथ्यौ पत्तो ! अनि तिमी भन्थ्यौ, ‘देख्यौ तिम्रो मायाभन्दा त मेरै माया पो ठूलो । मेरो हारमा तिम्रो जित खोज्ने यो कस्तो हो माया मेरो...!’
माया ? पहिलो लकडाउन हप्तामै मायाको मुना पलाएर पनि पात हाल्ने आफ्नो आकार लिइसकेको थियो ।
अब हामी सपना देख्न थालिसकेका थियौं । एकले अर्कालाई सम्बोधन गर्दा पनि ‘काली’ र ‘काले’ भन्न थालेछौं । ऊ अति नै मायालु थियो । अरुजस्तो थिएन, मलाई आदर–सम्मान गर्थ्यो । मेरो पेसालाई कदर गर्थ्यो । ऊ भन्थ्यो, ‘तिमी आफ्नो काम कहिल्यै नछाड्नु !’ मेरो नाटक, फिल्म हेरेको थियो उसले । सायद उसका यस्तै कुराले म ऊसँग नजिकिँदै गएकी थिएँ । मैले धेरै नै सपना बुन्न थालें क्यारे ! धेरै नै आशावादी हुन थालें क्यारे !
बिहान उठ्नेबित्तिकै पहिलो आवाज उसैको त सुन्थें । फोनमा ऊ ‘शुभप्रभात’ भन्थ्यो । खाना खायौ ? खाजा खायौ ? भात खायौ ? अनि शुभरात्री !
उसको फोन आइदिओस्जस्तो लाग्न थाल्दाथाल्दै लकडाउनको दोस्रो सातादेखि उसको फोन, एसएमएस, शुभप्रभात, शुभदिन, शुभरात्रि कम आउन थाल्यो ।
मनले सोधिरह्यो– मबाट केही गल्ती त भएन ? उसलाई सोधें पनि । उसले भन्यो, ‘होइन त्यस्तो ! आजकल अलि बोल्न मन लाग्दैन कसैसँग पनि ।’ उफ् ! मन चसक्क भयो– कसैसँग पनि ?
ए...! म त उसको ‘सबै’भित्र पो पर्दो रहेछु । त्यस दिनदेखि लाग्यो– सायद मैले नै पो धेरै ठूलो सपना बुनेछु । बिस्तारै अब ‘हाई’, ‘हेल्लो’ पनि हुन छाड्यो । अब त २, ३ दिनमा एकदमै छोटो संवाद हुन्थ्यो, ‘के छ ? ठीक छ ? खाना खायौ ?’ संवाद सकियो । म भने त्यही समयको प्रतीक्षामा हुनेरहेछु– ए काली के गर्दै छेस् ? खाना खाइस् ? खाना राम्रोसित खा डाइटिङ गर्ने होइन, भाइरससँग लड्ने क्षमता हुनुपर्छ ! आज दिनभरि अनलाइन किन नआएकी ?
मैले पो ठूलो सपना बुनें कि ! हामी टाढा थियौं र पनि नजिकको आभास हुन्थ्यो । तर, अहिले नजिक छौं र पनि टाढा भएको आभास हुन्छ । यो लकडाउन त सकिएला । तर, मेरो मनमा भर्खर टुसा पलाएको पालुवा सदाका लागि लकडाउन नै रहनेछ ? तिम्रै सम्झनामा मेरो शहरको कविता लेखेको छु । पढ है–
तिमी भन्छौ यो सहर मेरो पो त,
माने तिम्रो सहरको पाहुना म
खुशी, चाहाना, भोक, लोभ, प्यास
सायद तिम्रो शहरले मेटाएन होला
तिमी भन्छौ यो सहर मेरो पो त
तिम्रो सहरमा आउने अनगिन्ति,
सपाना पनि नयाँ देखाउँछौ होला
खुशी, चाहान, भोक, लोभ, प्यास
पनि मेटाउछौ होला
भोका छौ तिमी र तिम्रो सहर,
धमिराले खोक्रो बनाईसक्यो
अत्तरको वासना, मलमलले ढाकेर
सहर न तिम्रो थियो न मेरै प्रकाशित : वैशाख १२, २०७७ १६:२०
चौरजहारीमा कोरोना उपचारको तयारी : तीन खालका बिरामीलाई फरक-फरक वार्ड
वैशाख १२, २०७७ हरि गौतम
रुकुम पश्चिम — चौरजहारी अस्पतालमा आइसोलेसन वार्डको काम धमाधम भइरहेको छ। २४ बेड तयार भइरकेका छन् भने अरु निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। हाल यहाँ २ जनाको उपचार चलिरहेको छ।
‘कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय र निर्देशनअनुसार काम भइरहेको छ,’ अस्पतालका प्रशासक डिलबहादुर गिरीले भने, 'बन्दै गरेको वार्ड पनि ३ दिन सम्ममा तयार भइसक्नेछ।'
चौरजहारी अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड बनाउने निर्णय गत चैत १३ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको थियो। त्यसका लागि ५० लाख बजेट अस्पताललाई निकासा गरिएको छ। भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले कर्णाली प्रदेशका तीन आइसोलेसन वार्डमध्ये चौरजहारी अस्पतालमा बिरामी भर्ना गर्नेगरी तयारी भइसकेको बताइन्।
प्रकाशित : वैशाख १२, २०७७ १६:१७